Rindrambaiko automatisation marketing: mpilalao fototra sy fividianana | Martech Zone
Rindrambaiko automatisation marketing: mpilalao fototra sy fividianana
Orinasa 142,000 mahery mampiasa rindrambaiko automatique marketing. Ny antony 3 voalohany dia ny fampitomboana ireo fitarihana mahay, fampitomboana ny famokarana varotra, ary ny fihenan'ny marketing any ambony. Ny indostrian'ny automatisation marketing dia nitombo hatramin'ny $ 225 tapitrisa ka hatramin'ny $ 1.65 miliara tao anatin'ny 5 taona lasa
Ity infographic manaraka ity avy amin'ny Marketing Automation Insider antsipirihany ny fivoaran'ny rindrambaiko automatique marketing avy amin'ny Unica efa folo taona lasa izay tamin'ny alàlan'ny fahazoana $ 5.5 miliara izay nitondra antsika hatreto, anisan'izany ireto sehatra marketing automatique manaraka ireto:
Act-On - Sehatra automatique marketing namboarina hanampiana anao hanome traikefa miavaka ho an'ny mpanjifanao. Manomboka amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika sy ny famokarana ny fangatahana, ny fihazonana sy ny tsy fivadihana, ny haitao misy antsika dia ahafahan'ny mpivarotra miavaka amin'ny fifaninanana ary mitondra vokatra tsara kokoa.
Fanentanana amin'ny Adobe - Vahaolana iray izay manampy anao manokana sy handefa fampielezan-kevitra manerana ny fantsom-pifandraisana amin'ny Internet sy ivelany. Ny fampielezan-kevitra dia afaka manome ny mombamomba ny mpanjifa mitambatra, ny fananganana fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fampielezam-peo, ny marketing amin'ny mailaka ara-nofo ary ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny fotoana tena izy.
Vahaolana Marketing any IBM - Ampahany amin'ny portfolio an'ny IBM Commerce, ny IBM Marketing Solutions dia ahafahanao mifanerasera amin'ny mpanjifanao amin'ny fifanakalozan-kevitra mifandraika amin'ny sehatra nomerika, sosialy, finday ary nentim-paharazana. Azonao atao ny manamboatra manokana sy manatsara ny fanentanana miampita fantsona ary ny ezaky ny marketing nomerika hanovana ireo mpitsidika ho mpanjifa sy mpisolo vava miverimberina.
Hubspot Workflows - Kolokoloy ny fifandraisanao sy ny mpanjifanao amin'ny fikolokoloana tanjona, ny isa amin'ny firaka, ny fampandrenesana anatiny, ny atin'ny tranokala manokana, ny lojika sy ny fizarazarana.
IBM Silverpop - Ataovy automatique ny fifandraisana manokana amin'ny ambaratonga ary handefasa hafatra misy dikany sy misy ifandraisany indrindra amin'ny dingana rehetra amin'ny androm-piainan'ny mpanjifa.
Infusionsoft - Namboarina hatrany ifotony hamahana ireo olana lehibe manjo ny orinasa kely. Raha mitady fomba marani-tsaina kokoa ianao amin'ny fandrefesana rehefa mitombo ianao dia afaka manampy ny sehatra Infusionsoft mahery. Tantano ireo asa isan'andro izay mampiadana anao — mandeha ho azy.
Marketo - Mitadiava ary ampandraiso ny mpanjifa mety. Ampio izy ireo hianatra izay tiany ho fantatra momba ny vokatrao rehefa manomboka ny diany. Mianara momba ny varotra fikarohana, pejy fitodiana, fanokana-tranonkala, endrika, haino aman-jery sosialy, ary ny fitadiavana fitondran-tena.
Microsoft Dynamics Marketing - Vahaolana iray momba ny fitantanana loharanom-bola ho an'ny varotra, fandrindrana, fanatanterahana ary Analytics manerana ny fantsona rehetra — mailaka, nomerika, sosialy, SMS, ary nentim-paharazana.
Oracle Eloqua - Ahafahanao manao drafitra sy manatanteraka fampielezan-kevitra ny mpivarotra raha manome traikefa ho an'ny mpanjifa manokana ho an'ny vinan'izy ireo. Mampiakatra be ny fampielezan-kevitra ho an'ny mpijery manerana ny fantsona ao anatin'izany ny mailaka, ny karoka fampisehoana, ny horonan-tsary ary ny finday. Miaraka amin'ny fitantanana fitarihana fitarihana sy famoronana fampielezan-kevitra mora, ny vahaolana dia manampy ny mpivarotra handray anjara amin'ny tokony ho izy amin'ny fotoana mety amin'ny dian'ny mpividy. Ny ekipa mpivarotra dia afaka manidy fifampiraharahana bebe kokoa amin'ny taha haingana kokoa, mampitombo ny ROI marketing amin'ny alàlan'ny fahitana amin'ny fotoana tena izy.
Cloud Cloud Marketingforce - Ny Salesforce Marketing Cloud dia mamela ny orinasa amin'ny habe hitombo ny orinasany amin'ny marketing mailaka matihanina. Na dia tsy manokana aza rindrambaiko automatique marketing, Salesforce Appexchange manana fampifangaroana novokarina niaraka tamin'ny fanatontosana Marketing Automation maro sehatra.
Salesforce Pardot - Ny B2B Marketing Automation dia mamadika ny mpivarotra isan'andro ho lasa maherifo mampidi-bola. Ny sehatry ny automatisation marketing azy ireo dia manome marketing amin'ny mailaka, fitarika mitarika, fitantanana fitarihana, fampifanarahana ny varotra ary fitaterana ROI.
Fampiharana amin'ny varotra Teradata - Mahatratra ny hakingana amin'ny marketing, hahatakatra ny mpanjifa amin'ny maha-olona tsirairay azy, ary manaova fifandraisana nomerika mahery manerana ny fantsona rehetra miaraka amin'ny Teradata Marketing Applications.
Marketing Automation Insider koa manondro ny salanisan'ny vidin'ny fahazoan-dàlana, izay nilatsaka satria nitombo ny isan'ny mpifaninana. Azonao atao ny mampitaha ireo fitaovam-pitaterana automatique lehibe rehetra ao anatin'ny 10 segondra ao amin'ny Marketing Automation Insider.
Ampitahao ny fitaovana automatique marketing
Tags: Act-Onrindrambaiko mihetsikaActonrindrambaiko aktonAdobeaprimocrowdfactoryeloquaprectargetGenoogrosocialhubspothubspot azo tanterahinasidina miasa hubspotIBMvahaolana ara-barotra ibmibm volafotsyibm unicaInfusionsoftinsighteraloopfusemarketbrightmarketing automatique insidermarketingpilotmarketomarketf crowdfactoryMicrosoftvarotra dynamics microsoftneolaneontraportOraclepardotazo tanterahinafiakaran'ny automatisation marketingsalesforcempivarotra pardotfivarotana varotraSilverPopteradatafampiharana ara-barotra teradataihanywhatnexx
Newlytics: fomba vaovao hahalalana ny varotrao
Mizarà ny boky fivarotana tianao indrindra amin'ny alàlan'ny Audible
Jul 20, 2016 amin'ny 5: 13 AM
Fanaparitahana mahafinaritra ny tantaran'ny automatisation marketing ary mahavariana ny mahita ny halaviran-tsika.
14 Feb 2017 tamin'ny 2:16 maraina
Lisitry ny rindrambaiko automatique marketing ambony indrindra. Tiako indrindra ny infusionsoft noho ireo fiasa mahatalanjona omeny.
Ny Salesforce dia nitombo indrindra tamin'ny fahazoana orinasa maro.